राजयोग र सुखी जीवन दर्शाउने हस्तरेखा कुन ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Intresting/राजयोग र सुखी जीवन दर्शाउने हस्तरेखा कुन ?
हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार हत्केलामा बनेका रेखाका सहायताले कुनै पनि ब्यक्तिको भविष्य र उसको स्वभावका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार हत्केलामा राम्रो र खराब दुबै प्रकारको रेखा बनेको हुने गर्दछ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार हत्केलामा बनेका शुभ निशानले ब्यक्तिको जीवनमा राजसुख प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ । राजयोगका अर्थ मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजदूत लगायतका पदको प्राप्ती हुन सक्छ ।
जुन ब्यक्तिको हत्केलामा शनि पर्वतमा त्रिशूलको निशान, भाग्य रेखालाई छुदै चन्द्र पर्वतबाट आएको हुन्छ यस्ता ब्यक्तिको प्रभाव बढ्ने गर्दछ । यस्ता ब्यक्ति ठुला अधिकारी हुने संभावना हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यस्ता ब्यक्तिले सरकारी मानसम्मान प्राप्त गर्दछन् ।
हत्केलामा हलो र तलवारको निशान भए यस्ता ब्यक्तिलाई शुभ र राजयोगका समान फल प्राप्त हुने विश्वास गरीन्छ । जुन ब्यक्तिको हत्केलामा यस्ता निशान हुन्छन् उनीहरुले प्रसस्त धन सम्पती प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
हत्केलामा मंगल पर्वत अग्लो भइ, मष्तिक रेखा दुई भागमा बाडिएको भए र कान्छि औला लामो भएमा यसले राजयोग सहित सरकारी क्षेत्रमा उच्च पद प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ ।
अनामिका औलाको फेदबाट निस्किएको रेखा मस्तिष्क रेखासंग मिली गुरु पर्वतमा छोएमा यस्ता ब्यक्तिले धनवान जीवन व्यतित गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
धेरै दुब्लो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? खानुहोस् दूध र छोकडा !!
यौ न उ त्तेज ना बढाउने औ षधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ?